Nitondra fanampiana mitentina 2 700 000 dolara ho an’ny fanjakana malagasy ny goverenemanta amerikana, ahafahana miatrika ny olan’ny haintany any amin’ny faritra Atsimo ary mampirisika ny hanaovana antso avo momba ny hamehana. Io no votoatin’ny fitsidihana …Tohiny
Maro tamin’ireo efa nanana fianakaviana tsy salama na hiteraka no nahatsikaritra ny fomba fiasa feno somongan’ny mpampivelona sasantsasany ao amin’ny hopitalim-panjakana iray eto an-drenivohitra. Zary fitaintainana hatrany araka izany ny fanarahana fitsaboana ao an-toerana na …Tohiny
Tsy mahay miaina. Efa hitam-poko, hitam-pirenena, ary nohamafisin’ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Narson Rafidimanana, fa namidin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) sy ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana, …Tohiny
Mamoa-doza hatrany ireo fiara mpitatitra manerana ny Nosy. Saika ahitana sy ahenoana lozam-pifamoivoizana hatrany ireo lalam-pirenena mampitohy faritra maro eto Madagasikara. Indrindra fa ireo lalam-pirenena be mpampiasa toa ny RN2 sy ny RN4 ary ny …Tohiny